← မြန်မာ ပြည်သား မှန်သမျှ ဖတ်သင့်သော…. ပေါ်ပေါက်လာသည့် အစိုးရ……
TO A SPECIAL WOMAN →
မြန်မာ့သတင်းစာများတွင် မပါသော သတင်းနှင့် ပုံ
Posted on March 1, 2011, in Cimphawng/Tuahkhak teng and tagged သိန်းစိန်၊ Myanmar Union, Burma, Myanmar Union, nationalism, Nationalsim. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.